यशको फिल्म ‘केजिएफ २’ले तोड्यो ‘बाहुबली’को लाइफटाइम रेडर्क, कति कमायो ? – Annapurna Post News
April 21, 2022 sujaLeaveaComment on यशको फिल्म ‘केजिएफ २’ले तोड्यो ‘बाहुबली’को लाइफटाइम रेडर्क, कति कमायो ?
काठमाडौं– दक्षिण भारतीय अभिनेता यशको पछिल्लो फिल्म ‘केजिएफ २’ हाल प्रदर्शन भइरहेको छ। विश्वभरबाट फिल्मले राम्रो प्रतिक्रिया मात्रै नभएर बक्सअफिसमा पनि निकै सफलता हासिल गरिरहेको छ। फिल्मले लगातार विभिन्न रेडर्कहरु तोडिरहेको छ।
फिल्म प्रदर्शनको छैटौं दिनसम्मको कमाइबाट फिल्मले २०१५ मा प्रदर्शनमा आएको चर्चित दक्षिण भारतीय फिल्म ‘बाहुबली’को लाइफटाइम रेडर्कलाई तोडेको छ। करिब सय करोडको बजेटमा बनेको फिल्म ‘केजिएफ २’ले ६ दिनसम्म ६७६ करोड ८० लाख भारतीय रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको छ। २०१५ को प्रभासको फिल्म ‘बाहुबली’को भने लाइफटायम ग्रस ६५० करोड भारतीय रुपैयाँ थियो।
योसँगै ‘केजिएफ २’ हालसम्म सर्वाधिक कमाइ गर्ने आठौं भारतीय फिल्म बनेको छ। भारतीय फिल्म विश्लेषक मनोजवाला विजयावालले बताएअनुसार फिल्मले छैटौं दिन अर्थात् मंगलबार ५१ करोड ६८ लाख भारतीय रुपैयाँको विश्वव्यापी ग्रस कलेक्सन गरेको छ।
त्यस्तै, फिल्मले पाँचौं दिन ७३ करोड २९ लाख, चौथो दिन १३२ करोड १३ लाख, तेस्रो दिन ११५ करोड ८ लाख र दोस्रो दिन १३९ करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँको विश्वव्यापी कमाइ गरेको छ। गत बिहीबार प्रदर्शनमा आएको फिल्मले पहिलो दिनमा १६५ करोड ३७ लाख भारतीय रुपैयाँको कमाइ गरेको थियो।
केजिएफ २ को हिन्दी भर्जनले छैटौं दिनसम्ममा २३८ करोड भारतीय रुपैयाँको आम्दानी गरेको छ। १४ अप्रिलमा सिनेमा हलमा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मलाई प्रशान्त निलले निर्देशन गरेका हुन्।
२०१८ को फिल्म ‘केजिएफ’को सिक्वेल रहेको यो फिल्ममा यशसँग सञ्जय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, रविना टण्डनलगायत कलाकार मुख्य भूमिकामा छन्। फिल्म हिन्दी, तेलगु, तमिल, कन्नड र मलायलम भाषामा रिलिज भएको थियो।
टिकटक स्टारलाई तीन वर्षको जेल सजाय
इन्द्रेणीका कृष्ण कंडेल र मन्जु पौडेलको कडा दोहोरी(हेर्नुहोस्)
करिश्मा कपूरसँग इन्गेजमेन्ट गरेर पनि बिहे गर्न पाएनन् बलिउडका यि चर्चित अभिनेताले
बलिवुडले ‘अफोर्ड’ गर्न सक्दैन भन्ने साउथ सुपरस्टार महेश बाबु को हुन् ?
भाइरल हुने लोभमा यस्तोसम्म गर्छन् नेपालीहरु (भिडियो)